Fanangona-Tsonia An-Tserasera Nahavita Namotsotra Soka-Dranomasina tany Philippines · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2013 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, বাংলা, Filipino, فارسی, Français, polski, Español, 日本語, English
Mponin'ny Nosin-tSokatra fotoana fohy mialoha ny famotsorana ny soka-dranomasina. Saripikan'i Ma Cecilia Mendioro Gendrano
Nahombiazana tamin'ny fandresen-dahatra ireo manampahefana tao amin'ny faritany iray ao Philippine ny fanangona-tsonia natao tao amin'ny Change.org hamotsotra pawikan (soka-dranomasina) iray voababo. Tafiditra anaty lisitry ny zavamananaina ahiana ho ripaka ny Pawikans.
Nosoniavin'olona mihoatra ny 1500 ity fanangona-tsonia natombok'i Rochelle Prado ity:
Misy Pawikan iray voafatotra ao amin'ny Nosin-tsokatra, Guimaras, ary vahana rehefa halaina sary ihany ka mandoa pesos dimy isaky ny mpizahatany. Ny tompon-tanàna no mpiambina an'ireo karazam-biby ahiana ho lany taranaka tsara indrindra eo amin'ny tontolo manodidina azy, ary tsy misy moa ny fampahalalana fa mila fahafahana ireny zavaboary ireny ary tsy helingelenina any amin'ny fonenany ara-boajanahary.
Avotsory ilay Pawikan ary iantohy amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny mponin'ny Nosin-tsokatra anaty fandaharan'asa natao hiaro sy hitandro ny fari-dranomasiny sy ny fiainany an-drano fa tsy hisy intsony ny fomba tahaka izao.
Namaly avy hatrany tamin'ny famotsorana ilay soka-dranomasina (pawikan) i Jesse Vego avy ao amin'ny DNER Departemantan'ny Tontolo Iainana sy ny Lohananon-karena Natioraly:
… Gaga ihany aho raha nahita fanangona-tsonia nandehandeha nefa tsy mbola nifandray tamin'ny biraoko akory ny mpanango-tsonia Rochelle Prado. Tokony hisaotra anareo aho fa raha lasa lavitra kokoa dia lasa nanaratsy laza ny Sampan-draharahako.
… Ilay lazaina fa Nosin-Tsokatra, toerana tsy hita ao amin'ny sarintany ofisialin'ny faritany, ilay nosy notondroina ho izy raha ny marina dia mbola anisan'ny tanibe.
Miambina manaraka ny fodian'ilay sokatra any an-dranomasina. Saripikan'i Ma Cecilia Mendioro Gendrano
Soka-dranomasina mody. Sarin'i Ma Cecilia Mendioro Gendrano
Nitatitra ny vaovao tsara ny Change.org :
FANDRESENA! Arahabaina i Rochelle Prado nanomboka ny fanangona-tsonia Change.org teto Philippines. Noho ny ezaka nataony sy ny an'ireo 1645 hafa, dia navotsotry ny Biraon'ny DNER mpiaro ny faritra sy ny fiainan-dia ilay soka-dranomasina nampiasaina tao amin'ny Nosin-tsokatra ho fakambola amin'ny fakana saripika.
Tokony hisy fomba fiainana hafa atolotra ny mponin'ny nosy, araka an'i Minerva Glindro:
Mila manolotra fandraharan'asa manome fiainana tsara kokoa ho an'ny tompon-tany mahatonga azy ireo ho mpiaro ny tontolo iainan-dry zareo ny governemanta. Tsy hampitsahatra ny tambolimbolina (ranomody) ny famotsorana fotsiny ilay sokatra.
Mampidira lalàna momba ny tontolo iainana, hoy i Rene Mikhael Resurreccion:
Tsy fantatro akory hoe nahoana moa isika no tsy maintsy nanao fanangona-tsonia. Raha mifanohitra amin'ny lalàna, dia mihetseha ho amin'izay tsy maintsy natao.
Na izany na tsy izany, zava-dehibe ho ahy na dia mety tsy hanana atidoha tahaka ny antsika aza io sokatra io fa tsy maintsy mba mahatsiaro ho irery sy LEO ihany koa izy indraindray, sa tsy izany? Eo ihany, mba mety mahavita zavatra ambonimbony kokoa noho ny fanaovana azy sarim-pahatsiarovana ihany koa io sokatra io. Mba afa-mampitombo isa ny taranaka izy ohatra
Nahita ny fomba nitrandrahana ny soka-dranomasina pawikans tao amin'ny nosy ihany koa i Pinky Arturo:
Afa-nankany aho rehefa nitsidika ny nosy.. Tsy nahatsapa afa-tsy alahelo ilay voary ny tao amiko tao. Tokony natsahatry ry zareo ilay izy ary navotsotra ilay sokatra!